Prof. Jawaari oo jawaab kulul ka bixiyay war qoraal ah oo laga soo saaray madaxtooyada Galmudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Jawaari oo jawaab kulul ka bixiyay war qoraal ah oo laga soo saaray madaxtooyada Galmudug
Guddoomiyaha cusub ee dhawaan loo doortay baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war qoraal ah oo laga soo saaray madaxtooyada Galmudug.
Prof. Jawaari oo bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal kooban ayuu ku sheegay inaanu jirin in wax wadatashi la yiraahdo uu qadka telefoonka kala qeyb galay madaxda madasha qaran, kaas oo looga hadlaayay xiisada siyaasadeed ee ka taagan Galmudug.
Prof. Jawaari oo hore uga mid ahaa madaxda madasha qaran ayaa sheegay in haatan uu dalka leeyahay baarlamaan islamarkaana aanu jirin wax la yiraahdo madasha qaran.
Dhinaca kale, Prof. Jawaari ayaa haatan u muuqda inuu iska fogeeyay ka mid ahaanshiyaha madaxda madasha qaran, kadib markii uu xaqiijiyay inuu dib ugu soo laabtay xilkii uu hore ka haayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, qoraalka kasoo baxay Prof. Jawaari ayaa lagu tilmaamaa mid dharbaaxo siyaasadeed ku ah madaxdii madasha qaran oo markii hore lagu eedeeynayay inay ku dhisan yihiin si sharci darro ah.